साउन १ गते देखि प्यान विना तलब नपाउने, १००० माथिको पारिश्रमिक प्यान अनिवार्य
Posted on Jul 13 2019
काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भूक्तानीमा नयाँ व्यवस्था गर्‍यो। सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा..
काठमाडौं । कर्मचारीहरुको बोनस सुविधालाई खुम्च्याउने गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लाखौं कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाएको छ । खासगरी, सर्बोच्चको फैसलासँगै आकर्षक बोनस बाड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था..
एभरेष्ट होटल सञ्चालन हुने, पुराना कर्मचारीलाई सम्पर्कमा आउन १५ दिने सूचना
काठमाडौं । बन्द अवस्थामा रहेको बानेश्वरस्थित होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल लिमिटेडले नियमित काममा फर्किन श्रमिकहरुलाई आग्रह गरेको छ । सञ्चालनको तयारीमा रहेको होटल एभरेष्टले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै आफ्ना सबै कर्मचारीलाई..
विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो हक–हितविरुद्ध हुने गरी संशोधन भएको ‘सेवा विनियमावली’ विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ट्रेड युनियन कर्मचारी..
रोजगारीका लागि मलेसिया जानु अघि यि संस्थाले गर्ने छन् परीक्षण (सूचीसहित)
काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीका लागि ९९ स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। मलेसिया रोजगारीका लागि इच्छुक दुई सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा ९९ योग्य देखिएका हुन्। यसअघि ३७..
लोकसेवा आयोगले साढे ४ लाख आवेदकबाट कमायो १४ करोड
काठमाडौं । लोकसेवा आयोग स्थानीय तहका लागि विभिन्न ९ हजार १६१ पदका लागि साढे ४ लाखले आवेदन दिएका छन् । आवेदनबाट आयोगले १४ करोड ४ लाख ११ हजार १५० रुपैयाँ राजस्व..
हिमालयन बैंकसहित तिनओटा बैंकमा ४ सय ५५ लाई अवसर, सहायकदेखि उच्चतहसम्म कर्मचारी माग
काठमाडौं । तीनवटा बाणिज्य बैंकहरूले साहायक देखि उच्च तहसम्मको लागि ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेका छन । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक जनता बैंक र हिमालयन बैंकले एकैसाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग..
लोकसेवाको विज्ञापन सर्वोच्चले रद्द गरेन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै परेका दुई रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै..
हुवासिन सिमेन्टमा २०४ जनालाई जागिरको अवसर
काठमाडौं। एकवर्षभित्रै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित हुवासिन सिमेन्टले उद्योग पूर्वाधारको काम धमाधम गरिरहेको छ। कम्पनीले काममलाई तिब्रता दिन आइतबार २०४ जना कर्मचारी माग गरेको छ। चाइनिज भाषा जानेकालाई कम्पनीले प्राथमिकतामा राख्ने छ।..
विद्युत् प्राधिकरणले साढे ६ सय कर्मचारी माग्यो, एसएलसी पासले आवेदन गर्न पाउने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६५४ जना नयाँ कर्मचारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना प्रकाशित गरी अधिकृत स्तर १० तहदेखि सहायक स्तरका कर्मचारीको समेत माग..
कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा हेर्नुहोस्
काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत लिइएको कोरियन भाषा परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । गत जेठ २५ र २६ गते लिइएको भाषा परीक्षाको नतिजा ईपीएस कोरियाले गएराति सार्वजनिक गरेको..
प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित, नतिजा कसरी हेर्ने ?
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले गत असोज १३ गते लिएको स्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन थालेको छ । मंगलबारबाछ सुरु गरेको नतिजा प्रकाशन जारी रहेको छ प्राथमिक तहको ताप्लेजुङ, कंचनपुर, दार्जुला, पाँचथर,..
यो वर्ष नर्सिङ क्षेत्रका मात्रै जापान जान पाउने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भिष्मकुमार भुषालले यो वर्ष नर्सिङ क्षेत्रका श्रमिक मात्र जापान जान पाउने जानकारी दिएका छन्। जापान खुल्नै लागेको भनेर भाषा पढाउँदै पैसा असुल गर्ने क्रम बढेका..
हिमालयन बैंकले कर्मचारी माग्यो, कति चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाडौं । बैंकमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भनेतपाईका लागि सुवर्ण अवसर छ । निजी क्षेत्रको एक स्थापित बैंकले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । हिमालयन बैंकले विभिन्न पदमा ४ कर्मचारीको..
एनआईसी एशियाले ४ सय जना कर्मचारी माग्यो, प्लस टु पास भए हुने
काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंकले एकै पटक ४०० जना कर्मचारी माग गरेको छ। बैंकले उपत्यकाभित्रका शाखा कार्यालयका लागि ५० जना शाखा प्रबन्धकको लागि विज्ञापन खुला गरेको छ। यस पदका लागि स्नातकोत्तर गरी..
मा.वि. तहको खुला प्रतिश्पर्धामा स्थायी नियुक्ती नपाएकालाई करारमा राख्न नामावली प्रकाशन
काठमाडौं ।शिक्षक सेवा आयोगले मा.वि. तहको खुला प्रतिश्पर्धाको स्थायी नियुक्ती सिफारिसमा नपरेकालाई करारमा नियुक्ती गर्न नामावली प्रकाशन गरकोको छ । पाँच वटै विकास क्षेत्रका लागि सबै विषयमा प्रतिश्पर्धी उमेद्वारको नाम सिफारिस..
शिक्षक सेवा आयोगद्धारा शिक्षक लाइसेन्स परिक्षा फारमको सूचना प्रकाशन, यसरी गर्नुस् आवेदन
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स परिक्षाको सूचना आज प्रकाशन गरेको छ । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा शिक्षण गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूबाट अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुनको लागि..
लोकसेवा आयोगको अनलाइनमा समस्या, अब फारम कसरी भर्ने ?
काठमाडौं । लोक सेवा आयोगको अनलाइन सिस्टममा समस्या आउँदा फारम भर्न चाहनेहरू मर्कामा परेका छन् । स्थानीय तहका लागि आवेदन दिने अन्तिम मितिको अघिल्लो दिन सोमवार लोक सेवाको वेबसाइट www.psconline.psc.gov.np/ लोड..
प्रदेश बजेटले कर्मचारीको थप तलब बढ्यो
काठमाडौं। प्रदेश नं ३ ले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि एक महिनाको तलब थप गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आरुथिक वर्ष २०७६ ०७७ को बजेटमार्फत प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश..
नेपाली र अंग्रेजी विषयको निमावि तहको नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस्
काठमाडौं । निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज १२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले नेपाली र अंग्रेजी..
गाडीभाडा बढाउने निर्णय फिर्ता, किन पछि हट्यो सरकार ?
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बनाएको ५ घन्टा नवित्दै निर्णय फिर्ता लिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार दिउँसो १२ प्रतिशतसम्म भाडा वद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले देशभरको..
तपाईको रुटमा कति पुग्यो गाडी भाडा ? हेर्नुहोस देशभरीको भाडाको विवरण
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक बसको भाडा १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले जानकारी दिए..
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज नहुने, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन खारेज..
बैंकमा रोजगारीको अवसरै अवसर, एनआईसी, एनसीसी र कामना सेवा मागे कर्मचारी
काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स ‘एनसिसी’ बैंक र कामना सेवा विकास बैंकले उच्च तहदेखि सहायकस्तरसम्मका कर्मचारी माग गरेका छन्। एनसिसी बैंकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका लागि विज्ञापन..
सामाजिक विषयको निमावि तहको नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस्
काठमाडौं । निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज १२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले सामाजिक विषयको पश्चिमाञ्चल,..
बागलुङ । जोमसोम बजारको दक्षिणपट्टि एउटा रमणीय गाउँ छ, ठिनी । गाउँलेले ठिनीलाई ‘लुकेको हीरा’ मान्छन् । नीलगिरि हिमालको काखैमा छ, ठिनी गाउँ । ठिनीको चिनारी प्राकृतिक सौन्दर्य र भू–बनोटमा मात्र..
विज्ञान विषयको निमावि तहको सबै क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, यसरी हेर्नुहोस्
काठमाडौं । निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज १२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञान विषयको मध्यमाञ्चल,..
लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर आफ्ना ‘भाइभतिजा’लाई जागिर दिन करारको बाटो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रवारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले आक्रोश पोखेका थिए । उनले भनेका थिए ‘हामीलाई पीडा छ..
साढे ९ हजार पदका लागि लोकसेवा गरेको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल लगतै..
निमावि तहको गणित विषयको सबै नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज १२ गते लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले गणित विषयको मध्यमाञ्चल,..
Results 845: You are at page3of 29